UPDATE: Fanaanka Khadar Keyow oo ku xiran Itoobiya iyo dadaalo socda oo lagu sii daynayo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Fanaanka Khadar Keyow oo ku xiran Itoobiya iyo dadaalo socda oo...
UPDATE: Fanaanka Khadar Keyow oo ku xiran Itoobiya iyo dadaalo socda oo lagu sii daynayo
Fanaanka Khadar Ibraahin Keeyow
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa socda dadaalo kala duwan oo la doonaayo in lagu sii daayo Fanaanka Khadar Ibraahin Keeyow oo ku xiran dalka Itoobiya.
Maalmihii la soo dhaafay ayeey soo baxeen wararka la xiriira inuu xiran yahay Khadar Keeyow, balse ma jirin cid si toos ah u xaqiijinaysay waxyaabaha uu u xiran yahay.
Xildhibaan C/qaadir Carabow oo ka tirsan Golaha Shacabka Somaliya ayaa sheegay inuu socdo dadaalka dib xuriyadiisa loogu siinaayo Khadar Keeyow oo ku xiran dalka Itoobiya.
Sababta Fanaanka loo xiray, ayaa waxa uu ku sheegay inay la xiriirto arrimo dhanka socdaalka ah.
“Waxaa dhawaan la xiray Fanaankeena Khadar Ibrahim Keeyow sabab la xariirta arrimaha socdaalka, waxana dadaal xoogan uga jirnay sidii uu Fanaankeena ku heli lahaa xuriyadiisa, waxaana aad aan uga mahadcelinayaa Wasarada arrimaha dibada Soomaaliya iyo Safaarada Soomaaliya ee dalka Ethiopia oo wada dadaalo lagu sii deynayo Khadar Keeyow.”Ayuu yiri Xildhibaanka.
Fanaanka Khadar Ibraahin Keeyow, ayaa wararka waxa ay sheegayaan laba cisho inuu ku xiran yahay xabsi ku yaallo Magaalada Addis Ababa, kadib markii ay qabteen Ciidamada Booliska dalkaasi.
Fanaanka Khadar Ibraahin Keeyow oo Ethiopia ku xiran